प्रकार्य - घुसाउनुहोस् - कोटिपाठ
रोमन सङ्ख्याको मान गणना गर्दछ । मा दायरा ० र ३९९९को बीचमा पर्न जरुरी छ ।
पाठ पाठ हो जसले रोमन सङ्ख्या प्रस्तुत गर्दछ ।
=ARABIC("MXIV") ले 1014 फर्काउँदछ ।
=ARABIC("MMII") ले २००२ फर्काउँदछ ।
ले क्रमाङ्कन प्रणालीबाट पाठ भित्र निर्दिष्ट आधारमा धनात्मक इन्टिजर रूपान्तरण गर्दछ । अंकहरू ०-९ र अक्षरहरू A-Z प्रयोग गरिन्छ ।
सङ्ख्या रूपान्तरण गर्नलाई धनात्मक इन्टिजर हो ।
र्याडिक्स् ले सङ्ख्या प्रणालीको आधारलाई इंकित गर्दछ । यो २ र ३६ बीचको कुनै धनात्मक इन्टिजर हुन सक्छ ।
न्यूनतम लम्बाइ (वैकल्पिक) क्यारेक्टर क्रमको न्यूनतम लम्बाइ निर्धारण गर्दछ जसमा सिर्जना गरिएको हुन्छ । यदि पाठ तोकिएको न्यूनतम लम्बाइ भन्दा छोटो भएको खण्डमा स्ट्रिङको बायाँमा शून्य थपिन्छ ।
=BASE(17;10;4) ले डेसिमल प्रणालीमा ००१७ फर्काउँदछ ।
=BASE(17;2) ले बाइनरी प्रणालीमा १०००१ फर्काउँदछ ।
=BASE(255;16;4) ले हेग्जाडेसिमल प्रणालीमा 00FF फर्काउँदछ ।
हालको सङ्केत तालिका अनुसार क्यारेक्टर भित्र सङ्ख्या रूपान्तरण गर्दछ । सङ्ख्या दुई-अंक वा तीन-अंक इन्टिजर सङ्ख्या हुन सक्दछ ।
सङ्ख्या क्यारेक्टरका लागि सङ्केत मान प्रस्तुत गर्ने १ र २५५ बीचको सङ्ख्या हो ।
=CHAR(100) ले क्यारेक्टरdफर्काउँदछ ।
सबै नछापिने क्यारेक्टरहरू स्ट्रिङबाट हटाउँदछ।
पाठ जसबाट नछापिने सबै क्यारेक्टरहरू हटाउनलाई पाठमा सान्दर्भित गर्दछ ।
पाठ स्ट्रिङमा पहिलो क्यारेक्टरका लागि सङ्ख्यात्मक सङ्केत फर्काउँदछ ।
पाठ पाठ हो जसका लागि पहिलो क्यारेक्टरको सङ्केत फेला पर्नु पर्दछ.
CODE("Hieronymus") ले ७२ फर्काउँदछ, CODE("hieroglyphic") ले १०४ फर्काउँदछ।
याहाँ प्रयोग गरेको सङ्केतले ASCIIमा सान्दर्भित गर्दैन, तर सङ्केत तालिकामा तुरुन्तै लोड हुन्छ ।
एउटा स्ट्रिङ भित्र पृथक पाठ स्ट्रिङहरू संयोजन गर्दछ ।
=CONCATENATE("सुभ ";"प्रभात ";"मिस् ";"डो")ले सुभ प्रभात मिस् डो फर्काउँदछ।
ले दिएको रेडिक्सको आधारमा धनात्मक इन्टेजरमा सङ्ख्या प्रणालीबाट क्यारेक्टरहरू सहित पाठ रूपान्तरण गर्दछ । रेडिक्स दायरा २ देखि २६ मा हुन जरुरी छ । खाली स्थान र ट्याबहरू बिर्सिइन्छ । पाठफाँट केस संवेदनशील हुँदैन ।
यदि रेडिक्स १६भएको खण्डमा, x वा X वा 0x वा 0X लिड गर्दा, र थपिएको h वा H, वास्ता गरिँदैन । रेडिक्स २ भएको खण्डमा थपिएकोbवा B वास्ता गरिँदैन । अरू क्यारेक्टरहरू सिर्जना त्रुटि उत्पन्न गर्ने सङ्ख्या प्रणालीलाई अधिनमा राख्दैन ।
पाठ रूपान्तरण गर्नुपर्ने पाठ हो । हेक्जाडेसिमल सङ्ख्या बीचको फरक छुट्याउन जस्तै A1 र कक्ष A1मा सन्दर्भको रूपमा तपाईँंले उद्धरण चिन्हहरू राख्न जरुरी हुन्छ, उदाहरणका लागि "A1" or "FACE" ।
=DECIMAL("17";10) ले १७ फर्काउँदछ ।
=DECIMAL("FACE";16) ले ६४२०६ फर्काउँदछ ।
=DECIMAL("0101";2)ले ५ फर्काउँदछ ।
राउन्ड गरिएको निर्दिष्ट दशमलव स्थानमा मुद्रा ढाँचामा रकमका सङ्ख्याहरू रूपानतरण गर्दछ।मानफाँट मुद्रामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सङ्ख्या प्रविष्टि गराउँदछ। वैकल्पिक रूपले,तपाईँंले दशमलवहरू फाँटमा दशमलव स्थानहरूको सङ्ख्या प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मान निर्दिष्ट नगरिएको खण्डमा मुद्रा ढाँचामा सबै सङ्ख्याहरू दुई दशमलव स्थानहरूमा प्रदर्शन गर्ने छ।
तपाईँंको प्रणाली स्ट्रिङहरूमा मुद्रा ढाँचा सेट गर्नु होस् ।
मान सङ्ख्या हो, कक्षमा समावेश गरेको सङ्ख्या वा सूत्रको सन्दर्भ जुन सङ्ख्यामा फर्कन्छ ।
दशमलवहरू दशमलव स्थानहरूको वैकल्पिक सङ्ख्या हो ।
DOLLAR(367.456;2) ले $367.46 फर्काउँदछ । दशमलव विभाजक प्रयोग गर्दछ जोहालको लोकेल सेटिङमा अनुरूप हुन्छ।
यदि तिनीहरू परिचित भएको खण्डमा दुई पाठ स्ट्रिङहरू तुलना गर्दछ र TRUE फर्काउँदछ । यो प्रकार्य केस-संवेदनशील छ.
text_1 तुलना गर्नलाई पहिलो पाठमा सान्दर्भित गर्दछ ।।
text_2 तुलना गर्नलाई दोस्रो पाठ हो ।
=EXACT("microsystems";"Microsystems") ले FALSE फर्काउँदछ ।
find_text भेटाउन लाई पाठमा सान्दर्भित गर्दछ ।
पाठ पाठ हो जहाँ खोजीले स्थान ग्रहण गर्दछ ।
स्थिति (वैकल्पिक) पाठमा भएको स्थितिहो जुन खोजीबाट सुरु हुन्छ ।
=FIND(७६;९९८८७७६६५५४४) ले ६ फर्काउँदछ ।
FIXED(१२३४५६७.८९;३;१)ले १,२३४,५६७.८९० फर्काउँदछ ।
पहिलो क्यारेक्टर वा क्यारेक्टरहरू पाठ स्ट्रिङमा फर्काउँदछ ।
पाठ पाठ हो जहाँ सुरुका आंशिक शब्दहरू निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
सङ्ख्याले (वैकल्पिक)सुरु पाठका लागि क्यारेक्टरहरूको सङ्ख्या निर्दिष्ट गर्दछ । यदि यो परामिति परिभाषा नगरेको खण्डमा एउटा क्यारेक्टर फर्काउँदछ ।
=LEFT("output";3) ले "out" फर्काउँदछ ।
खाली स्थान संलग्न स्ट्रिङको लम्बाइ फर्काउँदछ ।
पाठ पाठ हो जसको लम्बाइ निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
=LEN("Good Afternoon") ले 14 फर्काउँदछ ।
=LEN(12345.67)ले ८ फर्काउँदछ ।
सबै ठुलाअक्षर अक्षरहरू पाठ स्ट्रिङमा सानाअक्षरमा रूपान्तरण गर्दछ ।
पाठ ले रुपान्तरण गर्नुपर्ने पाठ सन्दर्भ गर्दछ ।
=LOWER("Sun") ले sun फर्काउँदछ ।
क्यारेक्टर स्ट्रिङको पाठ खण्ड फर्काउँदछ । परामितिहरूले स्ट्रिङ स्थिति क्यारेक्टरहरूको सङ्ख्या निर्दिष्ट गर्दछ ।
MID(पाठ; सुरु; सङ्ख्या)
पाठ निष्कर्षमा समावेश क्यारेक्टरहरू पाठ हो ।
सुरु निकर्षमा पाठको पहिलो क्यारेक्टरको स्थिति हो ।
सङ्ख्या पाठको खण्डमा क्यारेक्टरहरूको सङ्ख्या निर्दिष्ट गर्दछ ।
=MID("office";2;2) ले ff फर्काउँदछ ।
पाठ स्ट्रिङको सबै शब्दहरूको पहिलो अक्षर ठूलो गर्दछ ।
पाठ स्ट्रिङको खण्ड फरक पाठ स्ट्रिङमा प्रतिस्थापन गर्दछ । यो प्रकार्य क्यारेक्टरहरू र सङ्ख्याहरू दुवै (जुन स्वत:रूपमै पाठमा रूपान्तरण हुन्छन्) प्रतिस्थापन गर्नलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो प्रकार्यको परिणाम प्राय पाठको रूपमा प्रदर्शन हुन्छ । यदि तपाईँंले सङ्ख्यासहित अगाडिका गणनाहरू सम्पादन गर्ने विचार गरेको खण्डमा जुन पाठद्वारा पनिलेनै प्रतिस्थापन भइसकेको हुन्छ । तपालाई यसको पछाडि सङ्ख्यामा रूपान्तरण गर्नलाई VALUEप्रकार्य को प्रयोग आवश्यक हुन्छ ।
यदि तपाईँंले यसलाई सङ्ख्याको रूपमा वर्णन गर्न नचाहेको खण्डमा र स्वचालित रूपमा पाठमा रूपान्तरण भएको खण्डमा कुनै पनि पाठ समावेश सङ्ख्याहरू उद्धरण चिनोमा संलग्न गर्न जरुरी छ ।
REPLACE(पाठ; स्थिति; लम्बाइ; नयाँपाठ)
पाठले पाठमा सान्दर्भित गर्दछ जसको खन्डमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
स्थिति ले स्थितिमा पाठ भित्र सान्दर्भित गर्दछ जहाँबाट प्रतिस्थापन सुरु हुन्छ ।
लम्बाइ पाठमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने क्यारेक्टरहरूको सङ्ख्या हो ।
नयाँ पाठ पाठमा सान्दर्भित गर्दछ जसले पाठ प्रतिस्थापन गर्दछ ।
=REPLACE("1234567";1;1;"444") ले "४४४२३४५६७" फर्काउँदछ । पूर्ण नयाँ पाठद्वारा स्थिति १ मा एउटा क्यारेक्टर प्रतिस्थापन गरेको हुन्छ ।
ले दिएको प्रतिलिपिहरूको सङ्ख्याद्वारा क्यारेकटर स्ट्रिङ दोहोर्याउँदछ ।
पाठ दोहोर्याउनु पर्ने पाठ हो ।
सङ्ख्यादोहोरिएकाहरूको सङ्ख्या हो ।
परिणाम अधिकतम २५५ क्यारेक्टरहरूको हुन सक्दछ.
=REPT("Good morning"; 2)ले Good morningGood morning फर्काउँदछ ।
पाठ स्ट्रिङ्मा अन्तिम क्यारेक्टर वा क्यारेक्टरहरू परिभाषित गर्दछ ।
पाठपाठ हो जसको दायाँ भाग निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
सङ्ख्या (वैकल्पिक) पाठको बायाँ भागबाट क्यारेक्टरहरूको सङ्ख्या हो ।
=RIGHT("Sun";2) ले un फर्काउँदछ ।
रोमन अंकमा सङ्ख्याहरू रूपान्तरण गर्दछ । मान दायरा ० र ३९९९ बीचमा पर्न जरुरी छ ,मोडहरू इन्टिजर ० देखि ४ सम्म हुन सक्दछन ।
सङ्ख्या सङ्ख्या हो जसलाई रोमन अंकमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ ।
मोड (वैकल्पिक) सरलीकरणको डिग्री तोक्दछ । माथिल्लो मान, ठूलो रोमन सङ्ख्याको सरलीकरण हो।
=ROMAN(999) ले CMXCIX फर्काउँदछ ।
=ROMAN(999;0)ले CMXCIX फर्काउँदछ
=ROMAN (999;1) ले LMVLIV फर्काउँदछ
=ROMAN(999;2) ले XMIX फर्काउँदछ
=ROMAN(999;3)ले VMIV फर्काउँदछ
=ROMAN(999;4)ले IM फर्काउँदछ
find_text खोज्नु पर्ने पाठ हो ।
पाठपाठ हो जहाँ खोजीले स्थान लिएको हुन्छ ।
स्थिति (वैकल्पिक) पाठको स्थिति हो जहाँ खोजी सुरु हुन्छ ।
=SEARCH(54;998877665544)ले १० फर्काउँदछ ।
स्ट्रिङमा पुरानो पाठका लागि नयाँ पाठ प्रतिस्थापन गर्दछ ।
पाठ पाठ हो जसमा पाठ खण्डहरू परिवर्तन गर्नु पर्दछ ।
search_text जसमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने (समयहरूको सङ्ख्या) पाठ खण्डहो ।
नयाँ पाठजसमा पाठ खण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने पाठ हो ।
=SUBSTITUTE("123123123"; "3"; "abc") ले 12abc12abc12abc फर्काउँदछ।
यो प्रकार्यले खाली पाठ स्ट्रिङ्मा सङ्ख्या रूपान्तरण गर्दछ ।
मान रूपान्तरण गर्नुपर्ने मान हो । सन्दर्भलाई परामितिको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यदि सान्दर्भित कक्षले सङ्ख्या वा सङ्ख्यात्मक परिणाम समावेश सूत्र संलग्न गरेको खण्डमा परिणाम खाली स्ट्रिङ हुने छ।
=T(12345)ले खाली स्ट्रिङ फर्काऊदछ।
=T("12345")ले स्ट्रिंग १२३४५ फर्काउँदछ।
ढाँचा पाठ हो जसले ढाँचा परिभाषित गर्दछ । कक्ष ढाँचामा सेट गरेको भाषा अनुसार दशमलव र हजार विभाजकहरू प्रयोग गर्दछ ।
ले ठुला अक्षरलाई पाठफाँटमा निर्दिष्ट स्ट्रिङ रूपान्तरण गर्दछ ।
पाठ तपाईँंले ठुला केसमा रूपान्तरण गर्नलाई चाहेको साना केस अक्षरहरूलाई सान्दर्भित गर्दछ ।
=UPPER("Good Morning")ले GOOD MORNING फर्काउँदछ ।
सङ्ख्यामा पाठ स्ट्रिङ रूपान्तरण गर्दछ ।
पाठसङ्ख्यामा रूपान्तरण गर्नु पर्न पाठ स्ट्रिङ हो ।
=VALUE("४३२१")ले ४३२१ फर्काउँदछ ।
Title is: पाठ प्रकार्य